Kooxda Barcelona oo dhammaystirtay saxiixa Emerson, kaasoo noqonaya saxiixeedii saddexaad saddex maalmood gudahood : Calanka.com
Kooxda Barcelona oo dhammaystirtay saxiixa Emerson, kaasoo noqonaya saxiixeedii saddexaad saddex maalmood gudahood
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa dhammaystirtay saxiixa daafaca garabka midig ee Emerson, kaasoo ay kala soo wareegeen Naadiga Real Betis.
Barcelona oo si weyn suuga uga adeeganaysa ayaa sameysay saxiixeedii saddexaad muddo saddex maalmood gudahood ah.
Blaugrana ayaa dhiggeeda Real Betis dib ugala soo wareegtay daafaca garabka midig ee reer Brazil, Emerson Royal, kaasoo noqonaya saxeexeedii saddexaad ee ay sameeyaan saddex maalmood gudahood.
Labadii maalmood ee hore Barcelona ayaa ku dhawaaqday inay la wareegtay Eric Garcia iyo Sergio Aguero oo ay labadaba qaab bilaash ah kaga qaateen Kooxda Manchester City, taasoo muujinaysa sida ay u doonayaan inay isbeddel weyn sameyso xilli ciyaareedka soo socda.
Qaab ciyaareed liita ayay Barcelona ku dhammaysatay xilli ciyaareedkii dhowaa, maadaama ay xilli horeba isaga hareen tartanka Champions League, isla markaana ay kaalinta saddexaad kaga dhammaysteen kala horreynta horyaalka La Liga.
Ciyaaryahankan ay maanta dib ugala soo wareegeen Real Betis ee Emerson Royal ayay labada kooxood Barca iyo Betis ay markii hore Brazil kaga keeneen xiddigan markii ay lacago isku dareen, balse heshiiska ayay ku dareen qodob dhigaya in ciyaaryahanka ay dib ula soo wareegi karaan Barca haddii ay doonaan.
Muddo labo sanadood ah ayuu soo joogay Real Betis daafacan reer Brazil, isagoo labadaasi xilli ciyaareed uu waqti wanaagsan ku soo qaatay Betis, isla markaana uu ku hormariyey qaab ciyaareedkiisa.
Bayaan ka soo baxay Barcelona ayaa lagu xaqiijiyey in ay la soo wareegeen Emerson waxaana uu u dhignaa: “Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ku wargelisay Real Betis Balompié inay adeegsanayaan xuquuqdooda si ay dib ugu soo celiyaan Emerson Royal laga bilaabo 1-da Luulyo kaddib labo xilli ciyaareed oo amaah ah oo ay ku qaateen kooxda reer Andalusian.”
Emerson Royal ayaa dib ugula soo wareegeen waxaana ay bixiyeen kaliya 9 milyan oo euro, isagoo booska daafaca midig kula tartami doonaa Sergino Dest, maadaama lagu wado in Sergi Roberto lagu wado in laga fasaxo Camp Nou.